सीता भण्डारी प्रक,रणमा भेटियो यस्तो नोट”मलाई यो जिन्दगीबाट पुग्यो म सकिन बाँच्न” नोट झुटो कि साचो ? – Classic Khabar
सीता भण्डारी प्रक,रणमा भेटियो यस्तो नोट”मलाई यो जिन्दगीबाट पुग्यो म सकिन बाँच्न” नोट झुटो कि साचो ?
October 3, 2021 96
दुई वर्ष अघिमात्र विवाह बन्धनमा बाँ’धिएकी रुपन्देही तिलोत्तमाकी २७ बर्षीया सीता भण्डारी पौड्यालको आफ्नै घरमा रहस्यमय मृ,त्यु भएको घटना सार्वजनिक भएको छ । उक्त नगरपालिका ५ घर भएका ४३ बर्षीय टीका पौड्यालकी श्रीमती सीताको आफ्नै घरको कोठामा रहस्यमय मृ,त्यु भएको घ,टना माइतीजनले पत्रकार सम्मेलन गरि बाहिर ल्याएका हुन् ।
असोज ६ गते तीज समेत मानेर घर फर्किने गरि माइतीमा आएकी सीतालाई श्रीमान टीकाले भदौ १९ गते दिउँसो घरमा भतिजको बर्थडे छ ‘तिमी घर जाउ म पनि साँझ घर आउँछु’ भनेर पाल्पाबाट फोन गरे । उनले श्रीमानको बचन हार्न नसकी उनी घर फर्किइन् । उनी त्यस दिन दिउँसो घरबाट हिँडेका थिए । माइतीले उनी घरबाट हिँडेदेखि राति ९ बजेसम्म माइतीले फोन गरिरहे तर उनको फोन उठ्दै उठेन ।
अर्को दिन एक्कासी अर्को माइतीलाई काम छ भनेर टीकाको घरबाट बोलाइयो । माइतीजन त्यहाँ पुग्दा मुहार र’क्ता’म्मे अवस्थामा सीताको मृत्यु भइसकेको थियो । उक्त दृश्य देख्न साथ त्यहाँ पुगेका सीताका बाबु आमा बे’हो’स भई ढले । घ,टना भएको धेरै दिन बितिसके को छ तर अहिले घट,ना नयाँ मोडमा पुगेको छ प्रहरी ले सु’सा’इ’ड नो’ट फेला परेको प्रहरीले दा,बी गरेको छ। बाकी भिडियोमा हेरौ
Prevमिलन नेवार भक्कानिँदै भन्छिन्– डिभोर्सपछि पनि मेरो करियर सिध्याउन खोजिँदैछ (भिडियो)
Nextडिभोर्सपछि श्रीमतीलाई अंश नदिन आफ्नो ९ करोडको घर आफैं ज’लाए
संजय लीला भन्सालीको ‘हिरामन्डी’मा मनिषा कोइराला पनि, के छ उनको भूमिका ?
१८ वर्षीय पुष्पा लिम्बूको ज्यान लिने प्रेमी सार्वजनिक